SomaliTech.com Somali Irrigation Somalitalk.com Somali Weyn Somaliwide.net Safaritravels Somaliantv SomaliUK.com ?
The Ogaden Road ?
Wabishabeele Wardher Online Waqooyibari.com Waayaha Wadani.net Qormada Duljoogso .
Qormaada Duljoogso: Gumaysiga Itoobiya & gacanyareyaashiisa oo dalka Australia ku hungoobay damacoodiina uu noqday No Through Road. 9/07/2012 Qormaada Duljoogso: Dhulka Ogaadenya inay ONLF ka taliso hadaad maqasheen waa dhab ee ha beensanin. 15/05/2012 Duljoogso: Dhulka Ogaadeenya qiimaha uu leeyahay ayaa halganka dheer & dhiiga dadanaya sabab u ah. 15/03/2012 Dul Joogso: Gumaysiga Itoobiya oo Gibirkii uu shacabka Ogaadeenya diiday Soomaali inteeda badan ogolaysiiyay. 07/03/2012 Duljoogso: Qaababka shacabka Ogaadeenya lagu xidh-xidho & xaaladaaha argagaxa leh ee ay xabsiyada kula kulmaan. 14/10/2011
Duljoogso: Marti xog la'aantaan ku nacaye shidaalka Ogaadeenya ee lagu qamaamayo soo saaristiisu yay ka go'daa?. 15/08/2011 Duljoogso:Hamigii Itoobiya oo daciifay & halgankii ONLF midho dhalay. 02/04/2011
Duljoogso: Gumaysiga Itoobiya oo go'aansaday fadeexada dusha u saaran inuu ku gadiyo Ina Iley & kuwa damiirka ka aradan ee uu horjoogaha u yahay. 22/03/2011
Duljoogso:Xooga CJWXO oo gumaysiga Itoobiya & gacanyareyaashiisa argagax ku riday. 20/03/2011
Duljoogso: Dhulkaaga oo boos ninkii lahaa xidhan yahay lagaa siiyo ma horumarbaa mise waa dulinimo?. 9/02/2011
Duljoogso: dardarta halganka Ogaadeenya waa guul daalaa dhaca Itoobiyana waa dhamaadkii gumaysiga.12/12/201
Duljoogso: Qaniinyada waddaniga, Qabjabka Tigreega & Qamaamaha dabaqoodhiga maxay muujinayaan?. 29/09/2010
Qormada Juljoogso: Shacab u halgamaya si uu Cadawga haysta isaga kiciyo & gumaysiga doonahaya in uu dhusha ka saaraado xasuuqna kuwada midkee nabad diid ah?. 28/08/2010
Qormadda Duljoogso: Meles Zenawi oo qarin kari waayay sirtii Itoobiya waligeed u daboolayd.15/08/2010 Qormadda Dunljoogso:Shacabka Ogaadeenya waa Soomaali dhab ah waligoodna Itoobiyaan ma asyan noqonin maantana Allah ayaa ka koriyay oo koox yari Itoobiyaan kama dhigi karto. 29/07/2010
Qormadda Duljoogso ee maanta waxaan ku eegi donaa Dhufayskii u dambeeya ee gumaysiga & madax gaabnida uu sida dadban ugu adeegto. 25/07/2010
Qormadeena Duljoogso: Shacabka Ogaadeenya gaar ahaan Reer Jigjiga oo si fiican u fahmay uguna baraarugay Riwaayada cusub ee uu Melez alifay , jilayaashana ay ka yihiin Daa'uud Amxaar & Abdi Iley + kooxda Ibrahim Dheere. 06/07/2010 Qormada Duljoogso: Caqliga Guumaysiga iyo Kuwa uu Caqliga ka Xaday Qaybtii 2aad. 30/06/2010 Qormada Duljoogso: Caqliga Guumaysiga iyo Kuwa uu Caqliga ka Xaday. 24/06/2010
Qormada Duljoogso: Shacabka Ogaadeenya maanta gumaysiga Itoobiya maka lumin karaa fursada dahabiga ah miyuuse ka leexin karaa wadada ay cagta saareen ee xaqa ah?. 18/06/201
Qormada Duljoogso: Ururka Ardaydda Ogaadeenya ee (OSF) UK oo hadafkii loo aas-aasay ka midho dhaliyay. 27/05/2010
Itoobiya waligeed kama dhicin is badal aan xoog ku imanin. Qaybtii 2aad 19/05/2010
Qormada Duljoogso: Itoobiya waligeed kama dhicin is badal aan xoog ku imanin. Qaybtii 2aad 19/05/2010
Qormada Duljoogso: Itoobiya waligeed kama dhicin is badal aan xoog ku imanin. 07/05/2010 Qormada Duljoogso: Adeegayaasha Gumaysiga Ethiopia oo Ku Xayndaaban Buug cidhiidhi ah. 24/04/2010 Qormada Duljoogso: Ahmed Nashaad & Ina Iley oo dadka u gacan haadinayaan wa ayo maxayse tahay ujeedada ka dambaysa? 13/04/2010
Barnaamijkeena Duljoogso ee maanta waxaan ku eegi donaa Dhufayskii u dambeeya ee gumaysiga & madax gaabnida uu sida dadban ugu adeegto. 7/04/2010
Qormada Duljoogso:Qaabka ay u kala shaqaystaan Jaasuuska & Guumaysigu & meesha Jaasuusku ku dambeeyo. 30/03/2010
Qormada Duljoogso: Gumaysigu dadka uu ku adeegto muxuu ku doortaa saamayn intee le 'eg ayayse ku yeeshaan halganka xorinimo doonka ah?. 21/03/2010
Qormada Duljoogso: Odhaahada ay baryahan dambe gumaysiga & adeegayaashiisu cosobinayaan goormay bilaabantay?. 15/03/2010.
Qormada Duljoogso: Gulufka cusub ee Maxaabiista Jigjiga ku xidhan lagu qaaday maxaa sal u ah gumaysigase ma nafisi doonaa? 07/03/2010.
Qormada Duljoogso: Maxaabiista Ogaadeenya lagu bahdilayo oo loo isticmaalayo sida meelaha Xayawaanka ee loo daawasho tago (Zoo) 01/03/2010.
Qormada Duljoogso: Cabdi Iley & Daa'uud Amxaar oo shirkad ku ahaa u adeegida gumaysiga Itoobiya maxay isku qooraansadeen? 18/02/2010. Duljoogso oo ku hako: macnaha dahsoon ee ay xambaarsanyihiin Sawirada uu Amiin Caamir ku muujiyo Jabhadda ONLF & halganka Ogaadeenya lagu xoreynayo. 07/10/2009
Duljoogso oo ku hako: Qadiyada Ogaadeenya kuma dhisna siyaasad qudha. 28/10/2009 Duljoogso oo ku hako: qaybtii 2aad dadka gumaysiga Itoobiya u adeega & hababka ay u shaqeeyaan. 04/09/2009 Duljoogso oo ku hako: daboqoodhiga doolka ah oo ay ku soo biireen koox cusub oo la yidhaahdo bakhti fuu. 21/08/2009
Duljoogso oo ku hako: 15-ka August JWXO & shacabka Ogaadeenya maxay ugu suntantahay? 15/08/2009
"Qorahay Online waa wehelkaaga Rasmiga ah" ��
Copyright ?1999 - 2010, All rights reserved. Qorahay Online ?/td>